नेपाली समाचार | Latest News from Kathmandu, Nepal: नेपाल खबर
Showing posts with label नेपाल खबर. Show all posts
आँप ल्याएको भारतीय ट्रकमा तोडफोड
२६ असार, चितवन । चितवनको नारायणगढ क्षेत्रपुरस्थित महानगर ताजा तरकारी तथा फलफूल थोक बजारमा आँप ल्याएको भारतीय ट्रकमा तोडफोड भएको छ ।
विहान तीन बजे आँप लिएर बजार क्षेत्रमा प्रवेश गरेको यूपी ४१ ए टी २६९१ नम्वरको भारतीय मालबाहक ट्रकमा तीन जना युवाले तोडफोड गरेका हुन् । स्कुटरमा आएका ती युवाले गाडीको अगाडिको सिसा फुटाइदिएका छन् ।
उनीहरुले पेट्रोल छर्किएर आगो लगाउने प्रयाससमेत गरेको फलफूल तथा तरकारी व्यवसायी संघका अध्यक्ष थिरप्रसाद धितालले जानकारी दिए । ‘ती युवाहरुले तोडफोडपछि पेट्रोल छर्किएर आगो लगाउने प्रयास गरेका रहेछन्, तर चिसोका कारणले सलाई ओसिएपछि आगो नबल्दा ट्रक जोगियो,’ अध्यक्ष धितालले भने, ‘यसले ब्यापारीहरुमा भय बढाएको छ ।’
सो ट्रकमा पाँच टन आँप थियो । ट्रकमा तोडफोड गर्दै आगजनीको प्रयास गरेपछि केही ब्यापारीहले प्रतिकार गरेका थिए । त्यसपछि ती युवाहरु स्कुटरमै फरार भएको चितवन प्रहरीले जनाएको छ ।
चितवन प्रहरीका प्रवक्ता एकनारायण कोइरालाले दोषीहरुको पहिचान नभएको बताए । प्रहरीले तोडफोड गर्नेहरुको खोजी कार्य तीव्र पारिएको जनाएको छ ।
चितवनकै सबैभन्दा ठूलो यो तरकारी बजारमा सीसीटीभीसमेत छैन । तर बजारको सुरक्षाका लागि सीसीटीभी जडानको प्रकृया भने अघि बढाइएको अध्यक्ष धितालले बताए ।
बलिउडका सवैभन्दा महंगो सम्बन्ध विच्छेद थियो, अभिनेता रितक रोशन र सुजैन खानको । उनीहरुको सम्बन्ध विच्छेदले बलिउडमा ठुलै पराकम्पन ल्याएको थियो । जबकी रोशन-सुजैनको दुई सन्तान समेत छन् ।
सुजैनले हालै मात्र रितिकको उक्त फिल्म हेरेपछि इन्स्टाग्रँममा लेखिन्-‘रितिक, यो तपाईंको अहिलेसम्मको सबैभन्दा उत्कृष्ट प्रस्तुतीमध्येको एक हो । मलाई तपाईंप्रति धेरै नै गर्व छ ।’ ‘सुपर ३०’ लाई विकास बहलले निर्देशन गरेका हुन् । फिल्ममा मृणाल ठाकुर, वीरेन्द्र सक्सेना, जोनी लिवर, अमित साध तथा पंकज त्रिपाठी जस्ता कलाकारले पनि अभिनय गरेका छन् ।
‘दबंग ब्वाई’ प्रभू देवाको गीतमा नाचेपछि….
बलिउड अभिनेता सलमान खान यतिबेला आफ्नो नयाँ फिल्म ‘दबंग-३’ को काममा व्यस्त छन्, जसलाई प्रभु देवाले निर्माण गरिरहेका छन् । उक्त फिल्मलाई यो वर्षकै बहुप्रतिक्षित फिल्मको सूचीमा राखिएको छ ।
दबंग-३ मा साउथ इन्डियन स्टार सुदीप खलनायकको भूमिकामा देखिंदैछन् । फिल्ममा सोनाक्षी सिन्हा तथा अरबाज खान आफ्ना पुराना चरित्र रज्जो तथा मख्खनचन्द पाण्डेको रुपमा देखिने छन् ।
यसैबीच सलमान खानले दबंग ३ का निर्देशक प्रभु देवाको अघिल्लोतिर उनको पुरानो फिल्मको एउटा लोकप्रिय गीतमा आकर्षक नृत्य गरेको भिडियो इन्टाग्राममा भाइरल भएको छ ।
सलमानले प्रभु देवालाई आफ्नो डान्स गुरु मान्दै ‘उर्वसी…’ गीतमा आकर्षक नृत्य गरेका हुन् । सलमानले नृत्य गरिरहेको भिडियो इन्स्टाग्रँममा अपलोड गरेका थिए, जसलाई सलमानका लाखौं फ्यानहरुले मन पराएका छन् ।
दबंग-३ को छायांकनको व्यस्तताका बीच सलमानले यो रमाइलो नृत्यसहितको भिडियो अपलोड गर्न भ्याएका हुन् ।
By नेपाली कान्छा on 7:21 PM | nepal news, samachar, नेपाल खबर | No comments
संजय लीला भन्साली र अक्षय एकसाथ, बन्ने भो राउडी राठौर-२
By नेपाली कान्छा on 7:02 PM | nepal news, samachar, नेपाल खबर | No comments
बलिउडमा अहिले रिमेक र सिक्वेलको सिलसिला चलेको छ । हलमा यतिबेला ‘कबीर सिंह’ चलिरहेको छ, जुन दक्षिण भारतिय चलचित्र ‘अर्जुन रेड्डी’को रिमेक हो ।
सन् २०१२ मा यस्तै रिमेक बनेको थियो, राउडी राठौर । अक्षयकुमार स्टारर यो चलचित्र दक्षिण भारितय चलचित्रको रिमेक थियो । राउडी राठौरलाई प्रभु देवाले निर्देशन गरेका थिए । अहिले यही चलचित्रको सिक्वेल बन्ने खबर आएको छ ।
अतः यसको सिक्वेलले निर्देशक सञ्जय लीला भन्साली र ‘खिलाडी ब्वाई’ अक्षयकुमारलाई एकै ठाउँ उभ्याउनेछ । भनिहालौं, राउडी राठौरका निर्मातामध्येका एक थिए सञ्जय लीला भन्साली । अहिले आएर पुनः एक पटक अक्षय र भन्सालीको जोडीले राउडी राठौर झैं कमाल गर्ने भएका हुन् । भन्साली र अक्षयले उक्त फिल्मको सिक्वेल बनाउने योजना बनाएका हुन् ।
सिक्वेलको योजना विगत लामो समयदेखि बनिरहेको बताइन्छ । तर, अक्षयको व्यस्त सेड्यूलका बीच त्यो यसअघि निमर्ँण हुन सम्भव भएको थियो । भन्साली स्वयं पनि अक्षयको फुर्सदको क्ष्ँणको प्रतिक्ष्ँा गरिरहेका थिए । अहिले आएर यो फिल्म बन्ने निश्चित प्रायः भएको हो । अक्षयले आफ्नो फिलम प्याडम्यानको एउटा इभेन्टका क्रममै राउडी राठौर-२ मा अभिनय गर्ने चाहना व्यक्त गरेका थिए । अहिले आएर अक्षयको चाहना पुरा हुने देखिएको हो ।
एउटा समाचारमा जनाइए अनुसार उक्त फिल्मको छायांकन २०२० मा प्रारम्भ हुने छ । यद्यपि, यो फिल्मको निर्देश्ँन कसले गर्ने भन्ने बारेमा अहिलेसम्म निश्चित भएको छैन ।
यसैबीच, अभिनेता अक्षय कुमार यही वर्षको अगष्ट १५ का दिन नयाँ फिल्म ‘मिशन मंगल’ मार्फत दर्शकमाझ आउँदैछन् । हालै मात्र उक्त फिल्मको टिजर सार्वजनिक भएको थियो । यसबाहेक उनी रोहित शेट्टीको सूर्यवंशीको छायांकनमा व्यस्त छन् । सूर्यवंशीबाहेक अक्षय कुमार लक्ष्मी बम, हाउसफूल ४ तथा गुड न्यूजमा पनि देखिने छन् ।
बनेपा ‘सिरिन्ज’ प्रकरणमा दुवै पक्षको विज्ञप्ति– परिस्थितिजन्य घटनाप्रति दुःखी छौं
By नेपाली कान्छा on 9:37 PM | nepal news, samachar, नेपाल खबर | No comments
२५ असार, काठमाडौं । बनेपाको कथित सिरिन्ज प्रकरणमा जोडिएका दुवै पक्षले मेलमिलाप गरेका छन् । उनीहरुले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै सबैमा संयम हुनसमेत आग्रह गरेका छन् ।
बनेपास्थित चारदोबाटोमा गत सोमबार युवतीमाथि सिरिन्ज आक्रमण भएको हल्लाकै भरमा वालिङ न.पा १३, स्याङ्जाका खगेन्द्रपसाद पाठकमाथि भीडले कुटपिट गरेको थियो । कुटपिटपछि प्रहरीले युवकलाई नियन्त्रणमा लिएर आरोपबारे छानबिन गरेको थियो ।
तर, अनुसन्धानका क्रममा युवकमाथि लगाइएको आरोप निराधार भएको पुष्टि भएको छ । उनी निर्दोष सावित भएपछि मंगलबार नै प्रहरीबाट थुनामुक्त भइसकेका छन् ।
कथित सिरिन्ज प्रकरणलाई लिएर बनेपालगायतका क्षेत्रमा त्रास फैलिरहेका बेला दुवै पक्षले घटना निराधार भएको भन्दै दुःख व्यक्त गरेका छन् ।
यो प्रकरणमा जोडिएका पाठक, वेथानचोक गाउँपालिका–६ काभ्रेपलाञ्चोककी मनीषा तामाङ र चौरीदेउराली गाउँपालिका–५ कि सपना वागदासले मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनाप्रति दःख व्यक्त गरेका हुन् ।
‘सिरिन्ज आक्रमण गरिएको भनी लाञ्छनासमेत लाग्न गई उत्पन्न भीडबाट सिर्जित परिस्थितिजन्य घटनाप्रति दुवै पक्ष खेद प्रकट गर्दछौं,’ पाठक, तामाङ र वागदास तीनै जनाले निकालेको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘शंकाको भरमा आगामी दिनमा समेत कुनै सामाजिक दुर्घटना नहोदोरिउन भन्दै सबैमा संयमताका साथ शान्ति सुरक्षालाई मजबुत बनाइ राख्न अपिल गर्दछौं ।
प्रशासकीय अदालत गठन नगर्ने प्रस्ताव कानुन समितिबाट अस्वीकार
By नेपाली कान्छा on 9:27 PM | nepal news, samachar, नेपाल खबर | No comments
२५ असार, काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको विधायन समितिबाट पारित भइसकेको प्रशासकीय अदालत गठनसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाको कानुन समितिले संशोधनसहित पारित गरेको छ ।
कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बुधबार बिहान बसेको बैठकले केन्द्रमा एउटा प्रशासकीय अदालत रहने गरी विधेयक संशोधन गरेको हो ।
यसअघि राष्ट्रियसभाको विधायन समितिले केन्द्रमा र प्रदेशमा बेन्चमात्र रहने व्यवस्थासहित विधेयक पारित गरेको थियो । राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत गरिएको विधेयकको मस्यौदामा भने केन्द्रमा बेन्च एउटा प्रशासकीय अदालत रहने र प्रदेशमा उच्च अदालतमा बेन्च रहने प्रस्ताव थियो ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले केन्द्रमा प्रशासकीय अदालत रहने व्यवस्था राख्दै प्रदेशमा बेन्च रहने व्यवस्था हटाएर विधेयक पारित गरेको जानकारी दिए ।
तर २ सयभन्दा बढी मुद्दा भएको अवस्थामा प्रदेश प्रशासकीय अदालत नै गठन गर्ने र कम भएको अवस्थामा अदालत आवश्यक छैन भनेर प्रश्न उठाउन नपाइने गरी संशोधन गरिएको’ पोखरेलले जानकारी दिए ।
समिति सभापति पोखरेलले राष्ट्रियसभाबाट संशोधन गरेर पठाइएको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरेको भए कार्यालय, जनशक्तिलगायतको व्यवस्थापनको झन्झटलाई आफूहरुले रोकेको दाबी गरे ।
बुधबार पारित विधेयकमा प्रशासकीय अदालतको मुकाम काठमाडौं उपत्यकामा रहने र सो अदालतको प्रादेशिक क्षेत्राधिकार नेपालभर रहने उल्लेख छ । अदालतको प्रादेशिक क्षेत्राधिकार न्याय परिषदको परामर्शमा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजिम हुने छ ।
यो पनि पढ्नुहोस प्रशासकीय अदालत कि इजलास ? राष्ट्रियसभाको संशोधनले प्रतिनिधिसभामा असन्तुष्टि
निजामती कर्मचारीसँग सम्बन्धित मुद्दाहरु हेर्ने गरी प्रशासकीय अदालत गठनको व्यवस्था गरिएको छ ।
अदालतको अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि पाँच वर्षको हुने छ । अध्यक्ष र सदस्यलाई दुई पटकभन्दा बढी अवधिको लागि अध्यक्ष तथा सदस्य पदमा नियुक्त गरिने छैन ।
अध्यक्षको सामान्य निर्देशन र नियन्त्रणमा रही अदालतको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा काम गर्न न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको एक जना रजिष्ट्रारको व्यवस्था पनि गरिने छ ।
विप्लव समूहको गोलीबाट प्रहरीको मृत्यु, विप्लवका कार्यकर्ताको पनि मृत्यु
२५ असार, काठमाडौं । भोजपुर सदरमुकाममा एक प्रहरी र विप्लव समूहका कार्यकर्ताको भिडन्तमा मृत्यु भएको छ ।
यो घटनाको भोजपुर सदरमुकामको हटिया लाइनमा भएको हो । घटनाको विस्तृत विवरण आउन बाँकी छ ।
पाहुना आएका ठूलोबुवा र ससुराको चिर्पटले हानेर हत्या
By नेपाली कान्छा on 8:47 PM | nepal news, samachar, नेपाल खबर | No comments
२५ असार, अछाम । अछामको मंगलसेन नगरपालिका–१ मा एक व्यक्तिले आफ्नो घरमा पाहुना आएका ठूलो बुवा र ससुराको हत्या गरेका छन् । कुन्तीबण्डालीको ढुंगानी निवासी लफे भनिने पिरमकुमार साउँदले सोही ठाउँमा बस्ने ठूलोबुवा देउसिंह थापा र ससुरा विरभान थापाको मंगलबार मध्यरातमा हत्या गरेका हुन् ।
साउदलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । हत्यापछि फरार रहेका साउदलाई मंगलसेन नगरपालिका–२ को खम्बबाट पक्राउ गरेको अछाम प्रहरी प्रमुख डिएसपी जनकबहादुर शाहीले जानकारी दिए ।
घटना राति करिब एक बजेतिर भए पनि प्रहरीले बुधबार बिहानपख पौने चार बजे खबर पाएको अछाम प्रहरीको भनाइ छ । घटनाको अनुसन्धान भइरहेको डिएसपी शाहीले बताए ।
ओखलढुंगामा बस दुर्घटना, ३ को मृत्यु
By नेपाली कान्छा on 8:37 PM | nepal news, samachar, नेपाल खबर | No comments
२५ असार, ओखलढुंगा । ओखलढुंगामा यात्रु बस दुर्घटना हुँदा तीन जनाको मृत्यु भएको छ भने १५ जना घाइते भएका छन् ।
मृतक दुई जना पुरुष र एक जना महिला रहेको बताइए पनि सनाखत नभएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय ओखलढुंगाले जनाएको छ ।
घाइते ११ जनालाई उपचारका लागि उदयपुरको घुर्मी अस्पतालमा लगिएको छ । गम्भीर घाइते ४ जनालाई भने हेलिकोप्टरबाट काठमाडौं पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
पानी परिरहेकाले बाटो चिप्लो भएका कारण बस दुर्घटना भएको प्रहरीले प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ ।
सलमान- कट्रिनाको विवाहको दृष्य भाइरल भएपछि
सलमान खान र कट्रिना कैफको विवाह भए के होला ? कुनैबेला यस्तो अनुमान सामान्य मानिन्थ्यो । पछि उनीहरुको ब्रेकअप भयो । अहिले कट्रिना सिंगल छिन् । साथै उनी पूर्वप्रेमी सलमानकै आसपासमा छिन् ।
हालैमात्र कट्रिना सलमानको फिल्म ‘भारत’मा देखिइन् । त्यही फिल्मको एउटा भिडियो अहिले चर्चामा छ, जसमा सलमान खान तथा कट्रीना कैफ विवाह गरिरहेका छन् । उक्त भिडियो प्रशंसकहरुमाझ चर्चाको विषय बनेको छ ।
हुन पनि सलमान खानका फ्यानहरुलाई केवल दुई वटा कुराको मात्र प्रतिक्षा भैरहेको हुन्छ । एउटा हो सलमानको नयाँ फिल्म तथा अर्को हो उनको विवाह कहिले हुन्छ ?
अहिलेसम्म फिल्महरुमार्फत सलमानले आफ्ना फ्यानहरुलाई ट्रीट दिइ नै रहन्छन् । तर विवाहको लागि भने उनले लामो प्रतिक्षा गराइरहेका छन् ।
यसबीचमा सलमानको नाम थुप्रै अभिनेत्रीहरुसँग जोडिइसकेको छ । थुप्रै अभिनेत्रीहरुसँग उनको रिलेशनशीप पनि भैरहेको छ, यद्यपि विवाहको प्रसंगमा भने उनी टाढा-टाढा भागिनै रहन्छन् । वास्तविक जीव्नमा सलमान विवाहबाट भाग्ने क्रम जारी नै रहे पनि रील लाइफमा भने उनले धेरै पटक विवाह गरिसकेका छन् ।
हालैमात्र सलमानको विवाहको एउटा भिडियो सार्वजनिक भएको छ, जसले निकै चर्चा समेत पाइरहेको छ ।
सलमानका डिजाइनर एश्ले रिलेबोद्वारा शेयर गरिएको उक्त भिडियोमा सलमानले कट्रीनासंग विवाह गरिरहेको देखिन्छ भने बाँकी मानिसहरुले उनीहरुमाथि फूल वषर्ाइरहेको देखिन्छ । उक्त भिडियो सलमानको पछिल्लो फिल्म ‘भारत’ को छायांकनको बेला खिचिएको हो, जुन अहिले आएर सार्वजनिक भएको हो । प्रशंसकहरुका लागि उक्त भिडियो कुनै टि्रट भन्दा कम छैन । यद्यपि, अब हेर्नुछ सलमानले वास्तविक जीवनमा भने कहिले विवाह गर्नेछन् ?
त्यसो त स्वयं सलमानका बुवा सलीम खानले पनि यो प्रसंगमा आफ्ना छोरासंग हार मानिसकेका छन् । उनलाई पनि आफ्नो छोरा दुलाहा बनेको हेर्ने चाहाना छ ।
यतिबेला सलमान खान टेलिभिजन शो ‘नच बलिए-९’ मा व्यस्त छन् । उक्त शोको सेटबाट पनि एउटा भिडियोले चर्चा बटुलिरहेको छ, जसमा सलमानले आफ्नो विवाहदेखि लिएर पूर्व प्रेमिकाहरुसंगका फिल्महरुको बारेमा कुराकानी गरेका छन् ।
उक्त भिडियोमा सलमानले भनेका छन्-‘हरेक व्यक्ति मलाई मर्डर मिस्ट्री सम्झेर त्यसलाई समाधान गर्नका लागि अघि बढ्छन् । जीवनमा मैले अहिलेसम्म के-के सुनें होला । आफ्नो विवाहको जिज्ञासा गर्ने पत्रकारसँग सलमान पुनः भड्किए, के सलमानको आगामी फिल्ममा उनकै कुनै एक्स हुनेछिन् ?’
कागको पछि दौडने हामी !
उहिले पुर्खाहरुले ठिकै भने, ‘आफ्नो कान छाम्नु छैन, कागको पछाडि दौडने ।’ अहिलेको पुस्ताले यो उखानलाई अधकल्च बुझेका होलान् । खास कुरो यस्तो छ ।
‘कागले कान लग्यो, कान लग्यो ।’ मान्छेहरु कराउँछन् । काग आकासतिर बत्तिएर उडिरहेको छ । सबै कागलाई लखेट्न पछि-पछि दौडन्छन् । कागले कसको कान लग्यो ? कसैलाई थाहा छैन । सबैको कान त सही हालतमै छ ।
आफ्नो कान नछामी कागको पछाडि दौडने यो प्रवृत्ति अहिले अरु मौलाएर गएको छ ।
भर्खरै मात्र वनेपामा एक पुरुषलाई ‘सिरिन्ज आक्रमण गरेको’ भन्दै अन्धधुन्द कुटपिट गरियो । भलै, यो घटनाको सत्यतथ्य आउन बाँकी नै छ । उनी दोषी हुन् वा होइनन् ? अनुसन्धानले देखाउनेछ । अहिलेसम्मको अवस्थामा उनले सिरिन्ज आक्रमण गरेको पाइएको छैन । सार्वजनिक बसमा यात्रा गरिरहेकी एक महिलाले ‘मलाई सिरिन्ज आक्रमण भयो’ भन्दै चिच्याएपछि अरु यात्रुले उनै पुरुषमाथि हातपात गर्न थाले । लछारपछार गर्न थाले ।
त्यती मात्र होइन, उनलाई ‘सिरिन्ज आक्रमणकारी’ भन्दै मोवाइल, ट्याबबाट भिडियो खिच्नेहरु ताँती लागे । क्षणभरमै सामाजिक सञ्जालमा ति भिडियो ‘भाइरल’ भयो ।
यदि उनले अपराध गरेको हो भने त ठिकै होला ।
तर, निर्दोष सावित भए भने ? उनले सिरिन्ज आक्रमण गरेको रहेनछ भने ? उनीमाथि झुटो आरोप लागेको रहेछ भने ?
सोच्नुहोस् त, उनले बेकसुर भोगेको सजायको जवाफदेही को हुन्छ ? उनले झेलेको अपमान, पीडा, दूव्र्यवहारको जिम्मा कसले लिन्छ ? सामाजिक सञ्जालभरी उनको जुन बदनामी भयो त्यसको क्षतिपूर्ति कसले दिन्छ ? उनी स्वयम् र उनको परिवारले भोगेको मानसिक प्रातडनाको क्षतिपूर्ति कसले गर्छ ?
यी प्रश्नहरुको जवाफ हामीसँग छैन । किनभने हामी गैरजिम्मेवार छौं । हामीलाई अरुको जीवनको मूल्य थाहा छैन । त्यही कारण हामी अनावश्यक उक्साहटमा लागेर जे पनि गर्छौं, जे पनि भन्छौं । हामीमा किन यस्तो प्रवृत्ति मौलायो ? मानव हुनुको गुण किन हामीले गुमायौं ? किन हामीमा राक्षसी स्वभावले प्रवेश गर्‍यो ?
हाम्रो विवेक कता हरायो ?
कुनैपनि कुरा सही हो वा होइन ? गलत हो वा होइन ? छुट्याउनका लागि हामीले ल्याब टेस्ट गरिरहनु आवश्यक छैन । कुनै प्रयोगशालामा पुर्‍याउनु पनि आवश्यक छैन । किनभने प्रकृतिले हामीमा चेतना, विवेक दिएको छ । चेतना र विवेकले नै हामी के सही र के गलत भन्ने कुरा छुट्याउन समर्थ छौं ।
तर, आज हामी आफ्नो विवेक र चेतनाको बिर्को लगाएर हल्लाको पछाडि दौडिरहेका छौं । अरुले जे भन्छ, हामी पनि त्यही भनिरहेका छौं । अरुले जे गर्छ, हामी पनि त्यही गरिरहेका छौं ।
नेता गणेशमान सिंह उहिले यस्तै प्रवृत्तिलाई ‘भेडा’ भनेर सम्बोधन गरेका थिए । भेडाको लस्कर जब भिरमा पुग्छ, अनायसै लड्न थाल्छ । उक्त लस्करमा भएका सबै भेडा त्यसरी नै लड्छ, जसरी पहिलो भेडा लडेका थिए । अर्थात पहिलो भेडा लडेपछि दोस्रो, तेस्रो, चौथो भेडाले सोचेनन् कि यहाँ लडिन्छ भन्ने कुरा । उनीहरुको विवेक र चेतना हरायो ।
अहिले हामीले पनि आफ्नो विवेक र चेतना गुमाएका छौं । त्यसो नहुँदो हो त अरुको हल्लाको पछाडि दौडने थिएनौं । कसैले केही भन्छ, केही गर्छ भने सही के हो ? यर्थाथ के हो ? हामीले कम्तीमा विवेचना गर्नुपर्छ । मन्थन गर्नुपर्छ । भिडले गतल देखाएको कुरा गलत नै हो त ? हाम्रो विवेकले छुट्याउनुपर्छ ।
यदि हामीलाई विवेक नचाहिने भएको भए किन प्रकृतिले यसको रचना गर्ने थिए ?
सत्य के हो ? खोजौं
गौतम बुद्धको आदर्शलाई आज विश्वले अंगालेर हिँडेको छ । बुद्धिज्मलाई स्विकार्ने र अंगाल्नेको संख्या आज करोडौं छन् । यद्यपी गौतम बुद्धको भनाईको सार यस्तो थियो, ‘मैलें जे भने त्यसलाई तिमीले अकाट्य मान्नुपर्छ भन्ने छैन । आफैले पनि निरिक्षण गर्नु । जाँच गर्नु । तिमीलाई यो सही हो भने त्यसलाई अंगाल्दा हुन्छ ।’
यसको अर्थ के हो भने कसैले भनेको कुरा आँखा चिम्लेर पत्याउनुपर्छ, मान्नुपर्छ भन्ने छैन । तपाईंले आफ्नो विवेकको प्रयोग गरेर त्यसको सत्यता पहिल्याउन सक्नुहुन्छ । जब तपाईंको विवेकले सही ठहर्‍याउँछ, तबमात्र तपाईंले त्यसमाथि विश्वास गर्नुपर्छ ।
तर, आज हामी हल्लाको पछाडि दौडिरहेका छौं । त्यसको वास्तविकता के हो ? सत्यता के हो ? हामीले खुट्याउन सक्ने अवस्थामा छैनौं । अरुले जे भन्छ, त्यही कुरालाई स्विकारेर बसेका छौं ।
कवि भूपि शेरचनले त्यसैले लेखेका थिएनन्, ‘यो हल्लै हल्लाको देश हो ।’
अहिले सामाजिक सञ्जाल ‘बाँदरलाई भर्‍याङ’ भएको छ । हल्ला फैलाउने र त्यसलाई आँखा चिम्लेर अनुमोदन गर्नेहरु सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याप्ती छन् ।
हल्लाको पछाडि लागेर अन्धधुन्द गलत काम गर्नुअघि आफैलाई सोधौं, मेरो विवेक त हराएको छैन ?
जीवन जिउने कलाः पाँच हजार बर्ष पुरानो ग्रन्थमा यस्तो छ
काम कसरी गर्ने, भोजन कसरी गर्ने, निद्राबाट कसरी जाग्ने, कामवासनाबाट कसरी मुक्त रहने ? यही कुरा सिकाउन्छ विज्ञान भैरव तन्त्रले ।
विज्ञान भैरव तन्त्र पाँच हजार बर्ष पुरानो ग्रन्थ मानिन्छ । यस ग्रन्थमा भगवान शिवले माता पार्वतीको आत्म उपलब्धिको एक सय बाह्र सूत्र बताएका छन् । यो सूत्र वा विधी जीवन जिउने एक पद्धती हो, जीवन जिउने एक कला हो । एक तौर-तरिका हो । जीवन कसरी जिउने ?
यस सूत्रमा ‘कसरी’ एक महत्वपूर्ण शब्द हो, जुन कुरा हाम्रो जीवनबाट हराएको छ । हामीले भुल्यौं कि जीवन कसरी जिउने ? हामीले यस्तो कुरा भेटेका छैनौ कि जसले जीवन कसरी जिउने भन्ने सिकाउँछ । न हामीलाई शिक्षक-शिक्षिकाले बताए, न आमाबुवाले बताए, न जान्नेबुझ्ने अग्रजले बताए ।
तन्त्रमा भनिएको छ, हामी आफ्नो मूल स्वभावमा छैनौं । हामी आफ्नो मूल स्वभावबाट टाढा रह्यौं । हामीले आफ्नो ‘मन’लाई सुन्यौं, ‘शरीर’लाई सुनेनौं । मन त हाम्रो चौथो तला हो । शरीर नै हाम्रो पहिलो तला हो । पहिलो तला, जहाँ हामी उभिएका छौं, त्यसलाई सुनेनौं । तर, चौथो तलालाई सुनिरहेका छौं ।
हामीले आफ्नो शरीरको कुरा कहिल्यै ध्यान दिएनौं । उसले बारम्बार हामीलाई इशारा गरिरहेको छ, बारम्बार भित्रबाट भनिरहेको छ, ‘तिमीले जे खाइरहेका छौ, त्यो सही छैन । पछि दुःख पाउनेछौं ।’
हामी खानेकुरा सेवन गरिरहँदा मनमा भने अर्कै कुरामा मग्न भइरहेका हुन्छौं । अर्कै कुरा विचार गरिरहेका हुन्छौं । कसैसँग कुराकानी गरिरहेका हुन्छौं । खानेकुराको असली स्वाद कस्तो थियो ? हामी भुल्छौं । वा बेवास्ता गर्छौं । जब स्वाद थाहा पाउँछौं, त्यसबेलासम्म पेट भरिसकेको हुन्छ । तर, स्वादकै लागि हामी अरु भोजन ग्रहण गर्छौं, जुन शरीरलाई आवश्यक थिएन । शरीरले डकार्छ र संकेत गर्छ कि ‘खानेकुरा बढी भयो ।’ तर, हामी उक्त कुरामा ध्यान दिदैनौं । नतिजा के हुन्छ ? शरीरमा अनावश्यक तत्व जम्मा हुन्छ । यही कारण मोटोपन बढ्छ । मोटोपनले रोगलाई निमन्त्रणा गर्छ ।
तन्त्रले भन्छ, भोजन गर्ने हो भने कस्तो गर्ने ?
भोजन गर्दा पूर्ण स्वाद लिएर गरौं । कुनै विचार होइन, कुनै कुराकानी होइन, आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान चपाउन र स्वाद लिनमा लगाउनुपर्छ ।
यदि ध्यान दिएर र पुरा चपाएर खानेकुरा खाने हो भने धेरै खाना खाइदैन । यसले गर्दा पाचन यन्त्रमा दबाव पर्दैन । पाचन यन्त्र चुस्त र बलियो भएपछि नै हामी धेरै किसिमका रोगबाट मुक्त हुने हो ।
तन्त्रले हाम्रो जीवन जसरी जिउनुपर्ने हो, त्यही किसिमले मार्गदर्शन गर्छ । तन्त्रले हामीलाई शरीरको भाषा सिकाउँछ । तन्त्रले भन्छ कि जो शरीरको अनुकुल हो, त्यो नैतिक हो । जो शरीरको प्रतिकुल हो, त्यो अनैतिक हो ।
तन्त्रले हामीलाई शरीरसँग जिउन सिकाउँछ । जब भोक लाग्छ, भोजन ग्रहण गरिन्छ । जब निद्रा आउँछ, सुतिन्छ, जब संगीत बज्छ नाचिन्छ । शरीरलाई यसरी स्वतन्त्रता दिनुपर्छ । स्वतन्त्रताको अर्थ उच्छृंखलता भने होइन ।
तन्त्रले हामीलाई सही ढंगले जिउन सकिन्छ । श्वास लिनुछ भने कसरी लिनुपर्छ, बस्ने हो भने कसरी बस्नुपर्छ, हिँड्ने हो भने कसरी हिँड्नुपर्छ । अर्थात दैनिक जीवनको कार्यलाई सुनियोजित गर्ने तरिका सिकाउँछ ।
जीवनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कार्य हो प्रजननका लागि वा आफ्नो आनन्दका लागि कामवासनाबाट मुक्त रहनु । तन्त्रले सिकाउँछ कि कसरी कामवासनाबाट मुक्त रहने ?
तन्त्र भन्छ कि कामवासनाबाट पूर्ण रुपमा मुक्त नपाउनुको कारण हाम्रो चित्त त्यसकै वरीपरी घुमेर हो । कामवासनालाई काम उर्जामा परिणत गर्न सकिन्छ । तन्त्रले कामवासनाबाट लामो समयसम्म मुक्त हुने सूत्र सिकाएको छ । तन्त्र भन्छ कि श्वास लिने हो भने कसरी लिने ? कामवासनमा श्वासको जुन लय थियो, यदि त्यो लयलाई समात्ने हो, श्वासलाई धीमा र गहिरो लिने हो भने कामवासनाबाट उत्रनै पर्दैन । अर्थात कामवासना कामउर्जामा र कामउर्जा केवल उर्जामा रुपान्तरण हुनेछ ।
पूर्वकर्मचारीको चाडपर्व खर्च कटौती नगर : कांग्रेस
By नेपाली कान्छा on 7:27 PM | nepal news, samachar, नेपाल खबर | No comments
२५ असार, काठमाडौं । प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले अवकाशप्राप्त कर्मचारीहरुलाई दिइँदै आएको चाडपर्व खर्च कटौती नगर्न माग गरेको छ ।
संघीय निजामती सेवाको प्रस्तावित विधेयकमाथि संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा गत आइतबार भएको छलफलमा अधिकांश सांसद्हरुले सेवा निवृत्त कर्मचारीहरुलाई चाडपर्व भत्ता दिनु उपयुक्त नभएकाले कटौती गर्न प्रस्ताव गरेका थिए ।
तर, कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयले सेवा निवृत्त कर्मचारीले पाउँदै आएको चाडपर्व खर्च कटौती नगर्न माग गरेको छ । पूर्व कर्मचारीहरुले लामो समयसम्म राष्ट्र सेवकका रुपमा योगदान पु¥याएकाले चाडपर्व खर्चमा मन खुम्च्याउन नहुने मत कांग्रेस संसदीय दलको छ ।
हाल सेवा निवृत्त कर्मचारीलाई चाडपर्व खर्चबापत दशैंमा १ महिना बराबरको तलब दिइँदै आएको छ ।
‘पेन्सन लिने राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई दिँदै आएको सुविधा कटौती गर्न नेपाली कांग्रेस सहमत छैन । तसर्थ उक्त खर्च कटौती नगर्न सरकार र सम्बन्धित निकायसँग नेपाली कांग्रेस संसदीय दल आग्रह गर्दछ’, कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन् ।